အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးက နှစ်နိုင်ငံ သမ္မတများ၏ဆွေးနွေးမှုများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် တိုက်တွန်း - Xinhua News Agency
ဝါရှင်တန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး Qin Gang က တရုတ်နိုင်ငံ အနေဖြင့် အမေရိကန်နှင့်အတူလက်တွဲကာ သမ္မတနှစ်ဦးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့မှုများအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် နှစ်နိုင်ငံအကြား ဆက်ဆံရေးတွင် အပြုသဘောဆောင်သည့် အင်အားများကို ပိုမိုတိုးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက် ညပိုင်းတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ချင် က ဝါရှင်တန် ဒီစီတွင် ကျင်းပသည့် အမေရိကန်-တရုတ် စီးပွားရေးကောင်စီ USCBC နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနားတွင် ယခုကဲ့သို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“မကြာသေးမီက ကျင်းပခဲ့တဲ့ ရုပ်သံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအတွင်း တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတရှီကျင့်ဖိန် နဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံသမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန်တို့ဟာ နှစ်နိုင်ငံအနေနဲ့ အပြန်အလှန်လေးစားဖို့၊ငြိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ဖို့၊ ဆက်ဆံရေးတိုးမြှင့်ဖို့ နဲ့အတူ ပဋိပက္ခတွေမဖြစ်ပွားစေဖို့ အပြုသဘောကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့အပြင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုမြှင့်တင် ဆောင်ရွက်သွားကြဖို့ သဘောတူညီခဲ့ပါတယ်၊”
ဒါ့အပြင် အဲဒီ တွေ့ဆုံပွဲမှာ မိမိတို့ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးခေတ်သစ်အတွက် လမ်းညွှန်မှုတွေ နဲ့ ညွှန်ကြားချက်တွေကိုလည်းချမှတ်ခဲ့ပါကြောင်း၊ စီးပွားရေးနဲ့ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာ နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရေးမှာ ခိုင်မာမြဲမြံမှုနဲ့ တွန်းအားပင်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့တဲ့အပြင် တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့လည်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ဖို့အဆင်သင့်ပင်ဖြစ်ကြောင်း” သူကဆိုသည်။
“ မိမိတို့အနေနဲ့ လက်ရှိ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး နဲ့ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုတွေမှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်သွားဖို့လိုအပ်ပြီးတော့ မိမိတို့ရဲ့ စွမ်းအင်နဲ့ ရာသီဥတုပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရဲ့အဓိပ္ပါယ်ဟာဆိုရင် နှစ်နိုင်ငံရဲ့ ကုမ္ပဏီတွေအတွက် အခွင့်အလမ်းအသစ်တွေ ရရှိစမှာဖြစ်တယ်လို့မိမိအနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်” ဟု သူက ဆိုသည်။
ချင်၏ မှတ်ချက်ထဲတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏အရည်အသွေးမြင့်မားသည့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် အဆင့်အတန်းမြင့်မားသည့် တံခါးဖွင့်ဝါဒကို အလေးအနက်ထားပြောကြားခဲ့သည့်အပြင် အမေရိကန်ကုမ္ပဏီများကိုလည်း တရုတ်နိုင်ငံ၏ အရည်အသွေးမြင့်မားသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများတွင် လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီး အကျိုးအမြတ်များကို ရှာဖွေရန်ဖိတ်ခေါ်ကြောင်း ၊ နိုင်ငံ၏ အဆင့်အတန်းမြင့်မားသည့် တံခါးဖွင့်ဝါဒ သည် ကြီးမားသော ဈေးကွက်ကြီးတစ်ခုကိုဖော်ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပါအဝင် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှ နိုင်ငံများ အတွက် အခွင့်အလမ်းသစ်တွေ ယူဆောင်လာမှာဖြစ်ကြောင်းဆိုသည်။
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းနှင့် ဝါရင့်သံတမန်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဟင်နရီ ကစ်ဆင်ဂျာ က အခမ်းအနားကို ရုပ်သံလင့်ခ်မှတစ်ဆင့်တက်ရောက်ခဲ့ပြီး အမေရိကန်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့ ယခုကြုံတွေ့နေရသော စိန်ခေါ်မှုမှာ နယ်ပယ်အချို့တွင် ယှဉ်ပြိုင်မှုများ ကြုံလာချိန်၌ ၎င်းတို့၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို မည်သို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမည်ဆိုသည့်အချက်ပင် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
နှစ်နိုင်ငံအတွက် ယှဉ်ပြိုင်မှုများ ကို စည်းမျဉ်းများဖြင့်လုပ်ဆောင်မှသာ အခြားတစ်ဘက်၏ အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်မှုမရှိဘဲ စီးပွားရေးဆိုင်ရာယှဉ်ပြိုင်မှုများမှာ အနှစ်သာရပြည့်ဝမည်ဖြစ် ကြောင်းသူကဆိုသည်။ (Xinhua)
Chinese ambassador to U.S. calls for implementation of spirit of meeting between presidents
WASHINGTON, Dec.3(Xinhua) — Chinese Ambassador to the United States Qin Gang on Thursday night said China will work with the U.S. side to implement the spirit of the meeting between the presidents and inject more positive energy into relations between the two countries.
Qin made the remarks at the annual gala of the U.S.-China Business Council (USCBC) in Washington, D.C.
Duringarecent virtual meeting, Chinese President Xi Jinping and his U.S. counterpart, Joe Biden, have agreed that the two countries should respect each other, coexist in peace, increase communication, constructively handle differences to prevent conflict, and strengthen cooperation,
the ambassador said, adding the meeting has “provided direction and guidance for our relations in the new era.” Noting that economic and trade cooperation has always been the “anchor and propeller” of bilateral ties, Qin said China is ready to enhance such cooperation with the United States.
“We need to strengthen existing cooperation in agriculture, manufacturing and financial services, and I believe our cooperation in energy and climate change means new opportunities to companies of both countries,” he said.
In his remarks, Qin also highlighted China’s high-quality development and high-standard opening-up, noting that American companies are welcome to come onboard to share the dividends of China’s high-quality development, and that the country’s high-standard opening-up will provideabigger market and more opportunities for countries worldwide including the United States.
Former U.S. Secretary of State and long-time diplomat Henry Kissinger, who attended the event virtually, said that the challenge the United States and China now face is how to continue their cooperation when they are thrown into competition in some fields.
It is important for the two countries to work out principles of competition so that meaningful economic competition can take place, without undermining each other’s key interests, he said. Enditem